မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): တောင်ငူခေတ် သမိုင်းထင်ရှား ဖြောင့်မတ်သည့်မင်းနှစ်ပါး
တောင်ငူခေတ် သမိုင်းထင်ရှား ဖြောင့်မတ်သည့်မင်းနှစ်ပါး
‘မင်းတရားရွှေထီး’ ဟုလည်း သိရှိကြသည့် တပင်ရွှေထီးကား လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည် ဘုန်းသမ္ဘာတို့နှင့် ပြည့်စုံသော မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးပင် ဖြစ်သည်။ စိတ်ထားဖြူစင်မြင့်မြတ်ပြီး အာဇာနည်ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်သော ထိုမင်းလက်ထက်တွင် ရန်သူ့ နယ်မြေ ဖြစ်သည့် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်၌ နားထွင်းမင်္ဂလာ ဆင်ယင်ကျင်းပခြင်း၊ ဖောင်ဖျက်နွှဲခဲ့သည့် ဘုရင့်နောင်၏ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ၊ ယိုးဒယားကို ချီတက်၍ အနိုင်တိုက်ကာ မြန်မာတို့၏ သတ္တိသွေးကို ပြခြင်းအပါအဝင် သမိုင်းကို လေ့လာလိုသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ဆိုရလျှင် တပင်ရွှေထီးဟု ရေးလိုက်သည်နှင့် ဘုရင့်နောင်ပါလာရမည်ဖြစ်သလို ဘုရင့်နောင်အကြောင်း ရေးရမည်ဆိုလျှင်လည်း တပင်ရွှေထီးပါ ပါလာရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုမင်းနှစ်ပါးကို ခွဲ၍မရ၊ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှစ၍ ညီနောင်နွယ်ရင်းများထက်ပင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ခင်ကြသူများဟု ဆိုရမည်။ မင်းနှစ်ပါးစလုံးက သမိုင်းတွင် ရှားရှားပါးပါးဆိုရလောက်အောင် အလွန်ဖြောင့်မတ် ကြသည်။ တည်ကြည်ပြီး စိတ်သဘောထား အလွန်ပြည့်ဝကြသည်။ ဘုရင့်နောင်ကလည်း ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ် ဖြစ်သည့်အတိုင်း တပင်ရွှေထီးအပေါ်တွင် အလွန်သစ္စာရှိခဲ့သည်။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အာဏာပလ္လင်အတွက် သားက အဖသတ်၊ ညီက အစ်ကိုသတ်၊ အစ်ကိုက ညီသတ်ဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုတ်မာကောက်ကျစ်ရက်စက်မှုများက ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ထိအောင် ရှိခဲ့သော်လည်း တပင်ရွှေထီးမင်းနှင့် ဘုရင့်နောင်မင်းတို့ကား သမိုင်းတွင်အပြစ်ဆိုစရာမရှိအောင် အညစ်အစွန်းကင်းစွာ စိတ်ရင်းပြည့်ဝ နှလုံးလှခဲ့ကြသဖြင့် သမိုင်းထင်ရှား ဖြောင့်မတ်သည့် မင်းနှစ်ပါးဟု ဆိုရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မင်းတရားရွှေထီးဟုလည်း သိရှိခဲ့ကြသည့် တပင်ရွှေထီးသည် တောင်ငူမင်းစဉ် (၂၉) ဆက်မြောက် ဖြစ်သည့် ကေတုမတီ တောင်ငူဘုရင်မင်းကြီးညို၏ သားတော် ဖြစ်သည်။ မင်းကြီးညိုသည် သက္ကရာဇ် (၈၄၇) ခုတွင် ကေတုမတီ တောင်ငူထီးနန်းကို စိုးစံခဲ့ပြီး နန်းစံသက်မှာ (၄၅) နှစ်ဖြစ်ကာ၊ ယခု တောင်ငူမြို့ကို တည်ခဲ့သောမင်း ဖြစ်သည်။
မင်းကြီးညို ပထမစံတော်မူသည့် မြို့မှာ ဒွါရာဝတီဖြစ်ပြီး၊ မြို့မှာ ကျည်းသည်။ ပေါင်းလောင်းမြစ်နှင့် ခပေါင်းချောင်းများမှ မြို့တော်နှင့် နီးကပ်လျက်ရှိသည့်အတွက် ဗိုလ်ပါ၊ ဆင်မြင်းတို့မှာ မလွန့်သာအောင် ရှိကြရသည်။ သို့ဖြစ်၍ နေရာသစ်ကို ရှာဖွေကာ တောင်ငူကို မြို့တည်စိုးစံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တောင်ငူကို သက္ကရာဇ် (၈၇၂)ခုတွင် တည်သည်။ တိကျစွာရေးရမည်ဆိုလျှင် သက္ကရာဇ် (၈၇၂) ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့နံနက် နှစ်ချက်တီးအချိန်တွင် တည်သည်။ မြို့တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အချာဖြစ်သော ဗဟိုမဏ္ဍိုင်၌တည်၍ မြောက်အရပ်၌ ဆွာချောင်း၊ အရှေ့အရပ်၌ ပေါင်းလောင်းမြစ်နှင့် မြတ်စောညီနောင် တောတန်း၊ တောင်အရပ်၌ ခပေါင်းချောင်း၊ အနောက်အရပ်၌ မင်းဝံတောင်တန်းကြီးများ ကာဆီးပိတ်တန်းလျက်ရှိကာ အလွန်သာယာပြီး စိမ်းလန်းစိုပြည်သည့် နေရာပင်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်တွင်း၌ လေးကျွန်းတန်ဆောင်ဟုခေါ်သည့် ကြာအင်းကြီး ရှိသည်။
တောင်ငူရွှေနန်းတည် မင်းကြီးညိုကား ဘုန်းသမ္ဘာနှင့် ပြည့်စုံပြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင်ထင်ရှားသည့် မင်းတစ်ပါးဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးစဉ်ကို ကြည့်လျှင် မြင်စိုင်းငါးစီးရှင်ကျော်စွာ (သက္ကရာဇ် ၇၀၄-၇၁၂) မှ စဉ်ဆက်လာသည့် သရေသင်္ခယာ၏ သားတော် မဟာသင်္ခယာနှင့် တောင်ငူရွှေနန်း (၂၇) မြောက် စည်သူကျော်ထင်မင်း၏ သမီးတော် မင်းလှညက်တို့ စုံဖက်ရာမှ ဖွားမြင်လာသည့်မင်း ဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် (၈၇၆) တွင် မင်းကြီးညိုသည် တပင်ရွှေထီး၏ မယ်တော်ဖြစ်သည့် ခင်ဦးနှင့် ဖူးစာရေစက် အကြောင်းဆက်၍ ပေါင်းဖက်ရန် ဖန်လာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင် မိုးကြီးများ နေ့ညမစဲ သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် နိုင်ငံတော် တခွင်တွင် ရေကြီးကာ ကန်တော်၊ ဆည်တော်များ ကျိုးပေါက်ခြင်း ဖြစ်ရလေသည်။ ကျိုးပေါက်သည့် ကန်တော်၊ ဆည်တော်များတွင် ငနွယ်ကုန်း (ပဲနွယ်ကုန်း) အနီးရှိ ဆင်အုံကန်တော်ကြီးမှာ အခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်သဖြင့် မင်းကြီးညိုသည် ထိုကန်တော်ရှိရာသို့ ဆင်မြင်း၊ ဗိုလ်ပါရံကာ ကိုယ်တော်တိုင် ဆည်ဖို့ရန်ထွက်ကြွတော်မူသည်။
ဝါးနွယ်ကုန်းမြို့သူကြီး သူရကျော်ခိုင်၏ သမီးမှာ ခင်ဦးဖြစ်သည်။ တင့်တယ်ပြေပြစ်လှပသည့် ရုပ်ဆင်းသွင်ပြင် လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသော ဝါးနွယ်ကုန်းမြို့တော်၏ ကျက်သရေဆောင် အလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ကာ ကောင်းသတင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသည်။ ဗဟိဒ္ဓအဆင်းတွင်သာမက၊ အဇ္စုတ္တအတွင်း နှလုံးအချင်းကပါ လှပသဖြင့် စိတ်ရင်းဖြူစင်လျက် မြတ်သောကောင်းမှု တို့ကို ပြုသူ ဖြစ်သည်။
မင်းကြီးညိုသည် ဆင်အုံကန်တော်ကို ဆည်ဖို့တော်မူရန် ရွှေဝေါတော်ဖြင့် ထွက်ကြွခဲ့ရာ ကန်တော်ကိုဆည်ရာ၌ ပါဝင်ကြသည့် ပြည်သူပြည်သားများထဲ၌ ဝါးနွယ်ကုန်းသူကြီးသမီး ခင်ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ မင်းကြီးညိုသည် ကန်တော်ကို ဆည်ဖို့သူများအား ရှုစားတော်မူစဉ် ရုပ်ဆင်းပြင်လျာ ကောင်းခြင်းတို့၏ လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသည့် ခင်ဦးကို မြင်တော်မူ မိသည်။ မြင်တော်မူလျှင် မူခြင်းပင် မင်းကြီးညိုမှာ ခင်ဦးအပေါ် ထိန်းချုပ်မနိုင်အောင် မြတ်နိုး တပ်မက်ခြင်း ဖြစ်ရသည်။
ထို့ကြောင့် ဆင်အုံကန်တော်ကို ဆည်ဖို့တော်မူသည့်အရေးကိစ္စပြီးသည်တွင် ခင်ဦးကို ကောက်တော်မူကာ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည် ကြွချီသည်။ ရွှေနန်းတော်အရောက်တွင် အပါးတော်၌ ထားကာ မြတ်နိုးစွာဖြင့် မြှောက်စားတော်မူသည်။ ဝါးနွယ်ကုန်းသူကြီးသမီး ခင်ဦးကို ကောက်တော်မမူမီက မင်းကြီးညိုတွင် ထင်ရှားသော မိဖုရားကြီး လေးပါး ရှိပြီးဖြစ်သည်။
ထိုမိဖုရားများမှာ . . .
ဦးရီးတော် တောင်ငူဘုရင် စည်သူငယ်၏ သမီးတော်ဖြစ်သည့် မိဖုရားခေါင်ကြီး စိုးမင်းထိပ်တင်။
သတိုးဓမ္မရာဇာ၏ သမီးတော် မင်းလှထွတ်။
မိုးဗြဲစော်ဘွား၏ သမီးတော် ခင်နွယ် နှင့်
မင်းကြီးညိုသည် ခင်ဦးကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတော်မူသဖြင့် မိမိအပါးတော်တွင်သာ ထားသည်။ ယုံကြည်တော်မူသဖြင့် မင်းကြီးညို စက်တော်ခေါ်လျှင် အပါးတော်မှ ခင်ဦးက ယက်လေဆက်သွင်းရသည်။
ထို့နောက် ခင်ဦးတွင် ပဋိသန္ဓေရှိလာသည်။ ထိုသို့ ပဋိသန္ဓေရှိလာပြီး သုံးလကြာသည့်အခါ ခင်ဦးတွင် မကြုံစဖူး ချင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုချင်ခြင်းမှာ မွန်တို့၏ဌာနေ ဟံသာဝတီ (ပဲခူး) တွင် ရှိသည့် မြေစေးနှင့် သရေခေတ္တရာ (ပြည်) နဝင်းချောင်း မှ ရေအေးကို သောက်သုံးလိုသည့် ဆန္ဒ ဖြစ်သည်။
မင်းကြီးညိုသည် ခင်ဦး၏အလိုတော် ချင်ခြင်းပြည့်ဝစေရန် ဟံသာဝတီမှ မြေစေကိုလည်းကောင်း၊ သရေခေတ္တရာ နဝင်းချောင်းမှ ရေအေးကို လည်းကောင်း လုပ်ရည်ကြံရည်ဖြင့် ပြည့်စုံသော သူရဲကောင်းများကို ယူဆောင်စေကာ ခင်ဦးအား စားသုံးစေသည်။ ပဋိသန္ဓေရှိစဉ် ခင်ဦးမှာ ထူးခြားသော အိပ်မက်များကိုလည်း မြင်မက်ခဲ့သဖြင့် မင်းကြီးညိုကို လျှောက်တင်ခဲ့သည်။
“သံတော်ဦးတင်ပါသည်ဘုရား၊ ကျွန်တော်မျိုးသည် အရှင့်အား ယပ်လေဆက်သွင်းနေစဉ် ငိုက်မျဉ်းလာသဖြင့် အရှင့်ခြေတော်ကို ဖက်ကာ အိပ်စက်မိပါသည်ဘုရား”
“ကဲ . . . ဆက်၍လျှောက်တင်ပါဦး”
“ထိုသို့ အိပ်မက်စဉ် ရောင်ခြည်တစ်ထောင် အလင်းဆောင်သည့် ရှင်နေမင်းသည် ကောင်းကင်ယံ၌ လှည့်ပတ်သွားလာနေရာမှ ဤရွှေနန်းတော်ရှိရာသို့ သက်ဆင်း၍ လာပြီးလျှင် ဘုရားကျွန်တော်မျိုးမ၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ အတင်းခွဲ၍ ဝင်လာပါသည်ဘုရား”
မင်းကြီးညိုမှာ လောကီပညာ၊ ဗေဒင်ယတြာမှစ၍ အိပ်မက်တိတ္တုံအရာတို့တွင် တတ်သိပြည့်စုံသော မင်းဖြစ်သဖြင့်၊ ယခု ခင်ဦး၏ အိပ်မက်အလိုကိုထောက်လျှင် လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်၊ ဘုန်းသမ္ဘာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံမည့် သားတော်ရတနာတစ်ပါးကို ခင်ဦးမှ ဖွားမြောက်လာမည်ဟု မြင်တော်မူသည်။ မင်းကြီးညိုမှာ မိမိ၏ ထီးညှောက်နန်းနွယ်အဖြစ်ထားတော်မူရန် သားတော်ရတနာကို ချင်ခြင်းဖြစ်တော်မူနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ မိဖုရားကြီးလေးပါးမှလည်း သားတော် ဖွားမြင်နိုင်ခြင်းမရှိကြသေး။ ယခုတော့ မိမိဆန္ဒပြည့်ဝရန် ဖန်လာပြီဟုတွေးကာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တော်မူကာ ခင်ဦးကိုလည်း ရှေးကထက်ပင် မြတ်နိုးခြင်းဖြစ်တော်မူရလေသည်။
“ခင်ဥိးငဲ့ . . . ယခုမြင်မက်သည့် အိပ်မက်မှာ လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်၊ ဘုန်းသမ္ဘာတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည့် သားတော်ကို ဖွားမြင်လာရန် ကြိုတင်ပြလာသည့် နိမိတ်တော်ဖြစ်သည်။ ယင်း ပဋိသန္ဓေနေလာသူတွင် နေကဲ့သို့ ဘုန်းကြီးမည်။ သားတော်အမှန်တကယ်ဖွားမြင်ခဲ့လျှင် အသင်ခင်ဦးအား မိဖုရားအရာသို့ မြှောက်တော်မူမည်”
မင်းကြီးညိုသည် သားတော်ရမည့်အရေးကို တွေးမျှော်ကာ ကိုယ်လုပ်တော်မျှသာရှိသည့် ခင်ဦးအား နှုတ်ကတိစကား ပေးတော်မူခဲ့သည်။
သို့ဖြင့် သက္ကရာဇ် (၈၇၈) ခု၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သို့ ရောက်ရှိသည်တွင် ကေတုမတီမြို့တော်ကြီး၌ ထူးထူးခြားခြား မကြုံစဖူးသော အတိတ်နမိတ်တို့ ဖြစ်ပေါ်၍ လာလေသည်။
ယင်းနမိတ်တို့မှာ . . .
အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ လေပြင်းမုန်တိုင်းတို့ တိုက်ခတ်လာကြခြင်း။
လျှပ်ပန်းတို့ ပြက်သန်းကာ လျှပ်စစ်လျှပ်နွယ်တို့ ထွန်းလင်းခြင်း။
မြေငလျှင် အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်၍ တော်လဲသံကြီးများ ပေါ်လာခြင်း။
စစ်ဆင်အပေါင်းတို့ အသံကျိုးကျိုးကျည်ကျည် အော်ဟစ်ကြ၍ စစ်မြင်းများဟီကြခြင်း။
တောတောင်မြို့ရွာသို့ မီးလျှံကဲ့သို့ တောက်ခြင်း။
မိုးသည်းထန်စွာရွာ၍ ရှောက်သီးလုံးပမာဏကြီးသော မိုးသီးကြီးများ ရွာချခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းနောက် ထိုနေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင် ထွန်းလင်းထင်ရှားကျော်ကြားသည့် သူရဲကောင်းအာဇာနည် မင်းမြတ်တစ်ပါးအဖြစ် မော်ကွန်းထိုးခဲ့ရသော တပင်ရွှေထီးကို ဖွားတော်မူခဲ့လေသည်။
မင်းကြီးညိုသည် ခင်ဦးမှ သားတော်ရတနာကို ဖွားမြင်တော်မူသည်ဟု ကြားလျှင်ကြားချင်းပင် ခင်ဦး၏ အဆောင်တော်သို့ ကြွချီတော်မူသည်။ မိမိ၏ ပထမဦးဆုံးသော ရင်သွေးငယ်မြတ်ကို ကိုယ်တော်တိုင် ပွေ့ပိုက်လျက် ရှုစားတော်မူသည်။ သားတော်၏ သန့်ပြန့်သောရုပ်ရည်၊ တည်ကြည်သည့် မျက်နှာနှင့် ရာဇရုပ်လက္ခဏာတော်တို့ကို ရှုမြင်ရသည့်အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်တော်မူရသည်။
ပို၍ထူးခြားသည်ကား အဆောင်တော်တွင်ရှိသည့် ရွှေတိုင်တော်၏ အလင်းရောင်တွင် သားတော်ထံမှ ထူးခြားသောလက္ခဏာကို တွေ့ရှိလိုက်ရခြင်းပင်။ ယင်းကား အခြားမဟုတ်။ သားတော်သည် မိမိကို ဖွားမြင်စဉ်က ကဲ့သို့ပင် ထူးထူးခြားခြား ဝင်ရိုးဖျားပမာဏရှိသည့် ရွှေရောင်တောက်ပနေသော ဆံပင်တော်တစ်ချောင်းပါရှိလာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သားတော်၏ လျှာ၌လည်း နက်မှောင်သည့် စက်လက္ခဏာအမည်းစက်များ ပါရှိလာသည်ကို အံ့သြဖွယ်တွေ့တော်မူရသည်။
(တပင်ရွှေထီး၏လျှာတွင် နက်မှောင်သော စက်လက္ခဏာပါရှိသည့်အတွက် ယိုးဒယား (ထိုင်း) ရာဇဝင်တို့၌ တပင်ရွှေထီးကို ‘လျှာနက်မင်း’ ဟု ဖော်ပြကြသည်။)
မင်းကြီးညိုသည် ဝမ်းမြောက်တော်မူစွာဖြင့် သားတော်ကို ပွေ့ပိုက်ထားရင်းမှ ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူသည်။
“ငါ၏သားတော်သည် အများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားကြန်အင်လက္ခဏာတော်များနှင့် ပြည့်စုံလှပေသည်၊ ဇာတာတော်ကို စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ၌လည်း ထူးခြားမွန်မြတ်လှပေသည်။ ငါကိုယ်တော်ထက်ပင် ဘုန်းသမ္ဘာကြီးမား၍ လက်ရုံးတော်အား စွမ်းထက်ပေလိမ့်မည်။ ငါ၏ဦးခေါင်းတော်တွင် ရွှေစင်ရောင်ရှိသော ထူးမြတ်သည့် ဆံတော်တစ်ပါးပါသကဲ့သို့ ငါ၏ သားတော်တွင်လည်း အလားတူ ဆံပင်တော်မြတ် ပါပေသည်။ ထို့ကြောင့် သားတော်၏ အမည်နာမတော်ကို တပင်ရွှေထီးဟု ဘွဲ့အမည်နှင်းအပ်မည်၊ မှတ်သားကြစေ”
သို့အားဖြင့် ထူးခြားလှသည့် လက္ခဏာတော်တို့နှင့် ပြည့်စုံသည့် သားတော်ရတနာမှာ ဖွားမြင်သည့် ညည့်၌ပင် ဖခမည်းတော် တောင်ငူရွှေနန်းရှင် မင်းကြီးညို အပ်နှင်းတော်မူသည့် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားမည့် ‘တပင်ရွှေထီး’ ဟူသော ဘွဲ့အမည်တော်ကို ရရှိတော်မူခဲ့ပေသည်။
မင်းကြီးညိုသည် ထူးခြားသောအတိတ်နမိတ်၊ ထူးခြားသောလက္ခဏာတော်တို့ဖြင့် ဖွားမြင်လာသော သားရတနာတော်အတွက် လွန်စွာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်ရသဖြင့် သားတော်အား ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည့် မင်းခမ်းမင်းနားများ ကျင်းပဆင်ယင်ကာ ချီးမြှင့်မြှောက်စားတော်မူသည်။ ချက်ကြွေသောအခါ ပုခက်တင်မင်္ဂလာကို စီရင်တော်မူပြီး၊ ထိုပုခက်တင်မင်္ဂလာတွင်ပင် သားတော်ကို အိမ်ရှေ့ဥပစာအဖြစ် အပ်နှင်းတော်မူသည်။
ထို့နောက် အထိန်းတော်၊ အချီတော်များနှင့် နို့ထိန်းများကို ရွေးချယ်ခန့်ထားတော်မူသည်။ ဆင်ယာဉ်၊ မြင်းယာဉ်မှစ၍ စိုးပိုင်သမျှသော ဘဏ္ဍာတော်များကိုလည်း သားတော်အား အပ်နှင်းတော်မူသည်။ တစ်ဖန် ‘နေရောင်ပြနန်းတော်ရာသည် ဘူမိနက်သန်မှန်သည့် အောင်မြေ ဖြစ်သည်။ ထိုအောင်မြေရှိရာသို့ သွားရောက်၍ သားတော်ကို ဘိသိက်မြှောက်ရလျှင် ဘုန်းသမ္ဘာကြီးမြတ်ခြင်း ဧကန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်’ ဟု ကြံစည်တွေးတောတော်မူပြီးလျှင် ထိုနေရောင်ပြ စံနန်းတော်သို့ သွားရောက်၍ သားတော်ကို ရတနာစုံအဖုံဖုံထက်သို့၌ တင်ကာ အဘိသေကမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြီးလျှင် ဘိသိက်မြှောက်တော်မူသည်။
ထို့နောက်မှ နေပြည်တော်ဝန်းကျင်ရှိ မိမိ၏သားတော်နှင့် သက်တူရွယ်တူမျှရှိသော ကလေးများမှ ဆွေကောင်းမျိုးကောင်း ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါသဏ္ဍန်လက္ခဏာသွင်ပြင်ကောင်းသော ကလေးငယ်တစ်ထောင်ကို စီစစ်ရွေးချယ်လျှက် သားတော်၏ ဖွားဖက်တော်များအဖြစ် ခန့်ထားတော်မူရာ၊ ထိုကလေးများထဲတွင် နောင်တစ်ချိန်၌ ဘုရင့်နောင်အဖြစ်ထင်ရှားလာမည့် ရှင်ရဲထွတ်မှာ ဖွားဖက်တော်ချုပ် ဖြစ်လေသည်။
ထို့ပြင် မျိုးရိုးဇာတိ မြင့်မြတ်သူများမှ ရွေးခြယ်လျက် သားတော်အတွက် အထိန်းတော်ကြီး (၇)ဦး ကိုလည်း ခန့်ထားသည်။ ထိုအထိန်းတော်များမှာ မင်းယောက်ျား (၅)ဦး၊ မင်းမိန်းမ (၂)ဦး၊ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအထိန်းတော်များက သားတော်တပင်ရွှေထီးအား သူငယ်ဘဝမှစ၍ ကြီးပြင်းလာသည့်တိုင်အောင် မင်းရေးမင်းရာ၊ တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေး၊ လောကီလောကုက္တရာဆိုင်ရာတို့၌ တတ်မြောက်လိမ္မာစေရန်နှင့် သားတော်၏ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှု အုပ်ထိန်းရသည့် တာဝန်များကို ယူကြရသည်။ ထိုအထိန်းတော်ကြီးများထဲတွင် ရှင်ရဲထွတ်၏ ဖခင် မင်းကြီးဆွေလည်း ပါဝင်သည်။ (မင်းကြီးဆွေသည် တပင်ရွှေထီး မင်းအဖြစ်သို့ ရောက်သောအခါ ‘မင်းရဲသင်္ခသူ’ ဟူသော ဘွဲ့အမည်ဖြင့် တောင်ငူဘုရင်ခံ ဖြစ်လာသည်။)
သားတော်အတွက် နို့ထိန်းခန့်တော်မူရာတွင်လည်း မင်းကြီးဆွ၏ဇနီး၊ ရှင်ရဲထွတ်၏ မိခင်မှာ နို့ထိန်းကြီးအဖြစ် ခန့်ထားခံရသည်။ မင်းကြီးညိုသည် သားတော်ကို အလွန်ချစ်တော်မူသကဲ့သို့ သားတော်၏မယ်တော် ခင်ဦးကိုလည်း အလွန်မြတ်နိုးတော်မူကာ ‘ရာဇဒေဝီ’ ဟူသော ဘွဲ့အမည်ဖြင့် မြောက်နန်းမိဖုရားအဖြစ် မြှောက်စားတော်မူသည်။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘုရင့်နောင်အဖြစ် ကျော်ကြားလာမည့် ရှင်ရဲထွတ်
သက္ကရာဇ် (၈၇၇) ခု၊ တပို့တွဲလဆန်း (၁၂) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖြစ်သည်။
ကေတုမတီမြို့သူမြို့သားများသည် ထိုနေ့တွင် ကြောက်မက်ဖွယ် တော်လဲသံကြီးကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကုန်ကြရသည်။ တော်လဲသံကြီးနှင့်အတူ မြေငလျင် တို့ကပါ ပြင်းထန်စွာ လှုပ်လာသည်။ မြေငလျင်တို့မှာ ဆက်တိုက်ဆိုသကဲ့သို့ပင် အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်နေသဖြင့် လူအားလုံးတို့မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့ ဖြစ်ကုန်ကြရသည်။ (ငလျင်လှုပ်သည့် အကြိမ်မှာ ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်၏။)
ထိုသို့ ထူးခြားသောအတိတ်နိမိတ်များကိုပြသည့် ထိုနေ့မှာပင် မင်းကြီးဆွေနှင့် တုရွင်းတိုင်ရွာသူ ရှင်မျိုးမြတ်တို့မှ နောင်တွင် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားလာမည့် သူရဲကောင်း အာဇာနည် မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်သည့် ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်တော်မူသော ဘုရင့်နောင်ကို ဖွားမြင်ခဲ့ကြသည်။ (ဘုရင့်နောင်မှာ တပင်ရွှေထီးထက် သုံးလနှင့်လေးရက် အသက်ကြီးသည်။) ထိုနေ့တွင် မင်းကြီးညိုအိမ်သို့ မင်းကြီးညို၏ ဆရာတော်ရင်းဖြစ်သည့် အရှင်မဟိန္ဒ ကြွတော်မူလာပြီး မင်းကြီးညိုက ‘ယနေ့ နံနက် နေတက် ၇ ဘွားအချိန်တွင် တပည့်တော်၏ ဇနီးသည်မှ သားယောက်ျားလေး ဖွားမြင်ပါသည်’ ဟု ဆရာတော်အား လျှောက်ထားသည်။
ဤသို့လျှောက်ထားချက်ကို ဆရာတော်ကြားသောအခါ ဆရာတော်က အတိတ်၊ နိမိတ်၊ ကိန်းခန်းများကို စိစစ်ဆင်ခြင်တော်မူပြီး ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူသည်။
“မင်းကြီးဆွေ . . . ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အတိတ်နိမိတ်တို့ကား လွန်စွာပင်ကောင်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်သား၏ ဖဝါးအောက်သို့ နိုင်ငံပေါင်းများစွာ ခိုလှုံလာကြလိမ့်မည်။ သင်၏သားသည် တချိန်၌ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့၏ အားထားမှီခိုရာကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မြေငလျှင် တုန်လှုပ်သောအတိတ်နိမိတ်မှာ ဖွားမြင်လာသော သားကောင်းရတနာ၏ ဘုန်းသမ္ဘာ အလွန်ကြီးကြောင်းကို ဤမဟာပထဝီမြေကြီးကပင် သက်သေခံသည့် အထိမ်းအမှတ်ပင် ဖြစ်သည်။ မြေပြင်အားလုံးကို အုပ်စိုးပိုင်ဆိုင်သော ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ မဟာပထဝီမြေကြီးကပင် ရှိခိုးဦးတင်ကာ ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကန်တော့သည့် အသွင်ဖြင့် လှုပ်သည်မှာ ဤမြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိကြသည့် ထီးဆောင်းမင်းအပေါင်းတို့က သင်၏သားကောင်းရတနာကို ကျိုးနွံစွာ ဦးခိုက်ကြလိမ့်မည်ဟူသည့် အတိတ်နိမိတ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မြေငလျှင်တုန်လှုပ်သော ကိန်းခန်းတိတ္ထုံသဘောမှာ ဆင်ဖြူရတနာ ရောက်လာခြင်း၊ ဆင်ဖြူကို အစိုးရခြင်း၊ တိုင်းနိုင်ငံတကာမှ သမီးကညာနှင့် လက်ဆောင်ပဏ္ဍာများ ဆိုက်ရောက်လာကြလိမ့်မည်၊ ‘ဆင်ဖြူရှင်’ ဟူသော ဘွဲ့ထူးကို ခံယူရလိမ့်မည်” ဟု ဆရာတော်က နိမိတ်ဖတ်တော်မူသည်။
(မှတ်ချက် ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ မြေငလျင်တုန်လှုပ်လျှင် ဆင်ဖြူရတနာရောက်ခြင်း၊ တိုင်းကြီးပြည်ကြီးတို့မှ သမီးကညာ ဆိုက်ရောက်လာခြင်းများ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူ၍ ငလျင်လှုပ်ကိန်းကို ဟောသော တိတ္ထုံကျမ်းတို့၌ ပြဆိုထား၏။)
ထို့နောက် ဆရာတော်က မင်းကြီးဆွေ၏ သာငယ်အမည်အား ‘ရဲထွတ်’ ဟု မှည့်ခေါ်ရန် မိန့်ဆိုတော်မူပြီးလျှင် ကျောင်းသို့ ပြန်ကြွ သွားသည်။ (ဆရာတော်မှာ မင်းကြီးညိုကိုးကွယ်သည့် ဆရာတော်ဖြစ်သောကြောင့် ‘မင်းကြီးဆရာတော်’ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုသည်။)
မင်းကြီးဆွေသည် ဆရာတော်ပေးတော်မူသည့် အမည်အတိုင်း ထူးခြားစွာဖွားမြင်လာသည့် မိမိသားငယ်ကို ‘ရှင်ရဲထွတ်’ ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ (ရဲထွတ်ဟူသည့် အမည်သညာ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ‘ရဲရင့်သူတို့၏အထွတ်အထိပ်’ ဟူ၍ဖြစ်၏။)
တပင်ရွှေထီးကို ဖွားမြင်တော်မူပြီးနောက် မင်းကြီးဆွေက တပင်ရွှေထီး၏ အထိန်းတော်ကြီး၊ မင်းကြီးဆွေ၏ ဇနီး ရှင်မျိုးမြတ်က တပင်ရွှေထီးကို နို့တော်ရည်တိုက်ရသည့် နို့ထိန်းကြီးအဖြစ် ခန့်ထားခံရသကဲ့သို့ သားငယ် ရှင်ရဲထွတ်မှာလည်း တပင်ရွှေထီး၏ ဖွားဖက်တော် ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ မင်းသားငယ် တပင်ရွှေထီးနှင့် ရှင်ရဲထွတ်တို့ မိသားစုသည် ရှေးရှေးဘဝဟောင်းက အကြောင်းရေစက်ပါလာ၍ ဟုပင် ဆိုရမည်။ မိသားစုရင်းချာပမာ ချစ်ခင်ကြ၏။ တပင်ရွှေထီးနှင့် ရှင်ရဲထွတ်တို့မှာလည်း ညီနောင်နွယ်ရင်းများပမာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ခင်ကာ သွားအတူ၊ စားအတူ၊ ကစားအတူ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ဤအကြောင်းကို မင်းကြီးညို သိတော်မူရာ “ငါ့သားတော်သည် မင်းကြီးဆွေ၊ ရှင်မျိုးမြတ်တို့နှင့် နီးစပ်သည့် လက္ခဏာပင် ဖြစ်သည်။ နန်းတော်တွင် ပျော်ရွှင်လိုသောဆန္ဒရှိဟန်မတူ မင်းကြီးဆွေ၏ အိမ်ကိုသာ နှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါ့သားတော်ရတနာ၏ စိတ်အလိုကို ဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့် မင်းကြီးဆွေနှင့် ရှင်မျိုးမြတ် မိသားစုကို ချီးမြောက်တော်မူမည်” ဟု တွေးတော်မူပြီးလျှင် နန်းတော်အနီး၌ အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်စေကာ မင်းကြီးဆွေတို့ မိသားစုနေထိုင်ရန် ချီးမြှင့်သနားတော်မူသည်။
မင်းကြီးညိုသည် သားတော်အား မင်းသားတို့တတ်မြောက်အပ်သည့် အဋ္ဌာရသတစ်ဆယ့်ရှစ်ရပ်သောပညာတို့ကို သင်ကြားပေးရာ ရှင်ရဲထွတ်မှာ တပင်ရွှေထီးနှင့်တွဲ၍ သင်ကြားရသည်။ နှစ်ဦးစလုံးက သတ္တိအရာတွင် အလွန်ရဲရင့်ထက်မြက်ကြသည်။ စစ်သွေးစစ်မာန် ထက်သန်ကြသည်။ ကြီးမြင့်သောရည်ရွယ်ချက်များ ရှိနေကြသည်။ မင်းကြီးညိုမှာလည်း ယောက်ျားပီသခန့်ညားပြီး ငယ်စဉ်ကပင် ရဲရင့်တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်သည့် သားတော် တပင်ရွှေထီး မင်းသားအတွက် လွန်စွာကျေနပ်နှစ်သက်အားရခြင်း ဖြစ်တော်မူရလေသည်။